Hollywood မှာ တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာခဲ့တဲ့ Brad Pitt ရဲ့ အနုပညာ ဖြတ်သန်းမှု ပုံရိပ်များ။ – SoShwe
Home/Entertainment/Hollywood မှာ တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာခဲ့တဲ့ Brad Pitt ရဲ့ အနုပညာ ဖြတ်သန်းမှု ပုံရိပ်များ။
Hollywood မှာ တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာခဲ့တဲ့ Brad Pitt ရဲ့ အနုပညာ ဖြတ်သန်းမှု ပုံရိပ်များ။
အော်စကာဆုရှင် ဘရက်ပစ်ကို ဒီဇင်ဘာ (၁၈) ရက်၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် People Magazine က ပေးအပ်တဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသားဆုကို (၂) ကြိမ်တိုင်တိုင် ရရှိထားသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မစ်ဇူရီတက္ကသိုလ်တွင် သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းပညာရပ်ကို သင်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ရုပ်ရှင်တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဘရက်ပစ်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Soshwe မှ သူ့ရဲ့ အနုပညာဖြတ်သန်းမှုတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
၁၉၈ရခုနှစ်မှာတော့ ဘရက်ပစ်ဟာ Another World ဆိုတဲ့ ပြဇာတ်ကနေစတင်ပြီး တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ စတင်ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်တယ်။
၁၉၈၈ခုနှစ်မှာတော့ 21 Jump Street ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အပိုင်းတစ်ပိုင်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး The Dark Side of The Sun မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အသက် (၂၀)ကျော်အရွယ်မှာတော့ Cutting Class ဆိုတဲ့ ထိတ်လန့်သည်းဖို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘရက်ပစ်ဟာ “ Too Young To Die ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ Juliette Lewis နဲ့ အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် သူတို့နှစ်ယောက် ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြပြီး အတူတူ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်ဟာ ဘရက်ပစ်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာကြီး Ridley Scott ရဲ့ Thelma and Louise မှာ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များနဲ့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်သူ Juliette Lewis နဲ့ပဲ “ Kalifornia ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပြန်လည်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာတော့ Juliette Lewis နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဒေးဗစ်ဖင်ချာရဲ့ Se7en ဆိုတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားကားထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကားထဲမှာ အတူတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Gwyneth Paltrow နဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပြီး People Magazine က ပေးအပ်တဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး အမျိုးသားဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာတော့ Twelve Monkeys ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Paltrow နဲ့ လေးနှစ်ကြာလက်တွဲခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူသက်တမ်းကို ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာတော့ Friends ဇာတ်ကားရဲ့ သရုပ်ဆောင် Jennifer Aniston နဲ့ စတင် တွဲခုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အေးဂျင့်တွေ မိတ်ဆက်ပေးမှုကနေတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာတော့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသားဆုကို ဒုတိယအကြိမ် ရရှိခဲ့ပြီး Jennifer Aniston နဲ့ Malibu မှာ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
The Mexican, Spy Game နဲ့ Ocean’s 11 တို့မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာတော့ Ocean’s 11 နဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာတော့ Sinbad: Legend of The Seven Seas ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားမှာ ဆင်းဘတ်အဖြစ် အသံ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Brad Pitt ဟာ လူကြိုက်များလာပြီး Troy ဇာတ်ကားနဲ့ Ocean’s 11 ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာတော့ Angelina Jolie နဲ့ Mr. & Mrs. Smith ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးနေရင်းနဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုနှစ်ထဲမှာပဲ Aniston နဲ့ တရားဝင် ကွာရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ Maddox နဲ့ Zahara တို့ကို မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ Zahara ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးကိုတော့ အီသီယိုးပီးယားကနေ မွေးစားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Jolie က Brad Pitt နဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ ကလေးဖြစ်တဲ့ Shiloh Jolie-Pit ကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ Pit နဲ့ အခြားအဖွဲ့သားတွေ ပြန်ပေါင်းပြီး Ocean’s 13 ကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာတော့ The Curious Case Of Benjamin Button မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အမြွှာတွေဖြစ်တဲ့ Knox Leon နဲ့ Vivienne Marcheline ကို ပြင်သစ်မှာ မွေးစားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာတော့ Megamind ဆိုတဲ့ Animation ကားမှာ အသံသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ၂၀၁၀ မှာတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ထက် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ World War Z နဲ့ Brad တစ်ယောက် အောင်မြင်မှုအများကြီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Gerry Lane အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရုံသာမက ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ပါ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်း တိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ Steve McQueen ရဲ့ “ 12 yearsaSlave ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို ထုတ်လုပ်ပြီး အော်စကာဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်မှာလည်း Jolie နဲ့ မင်္ဂဆောင်အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ World War Z ကို နောက်ဆက်တွဲ ဆက်လက် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလမှာတော့ Jolie နဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Plan B Entertainment ကို အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Hollywood မွာ တျဖည္းျဖည္းေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိလာခ့ဲတ့ဲ Brad Pitt ရဲ႕ အႏုပညာ ျဖတ္သန္းမႈ ပုံရိပ္မ်ား။
ေအာ္စကာဆုရွင္ ဘရက္ပစ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၁၈) ရက္၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခ့ဲပါတယ္။ အ့ဲဒါအျပင္ People Magazine က ေပးအပ္တ့ဲ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတ့ဲ အမ်ိဳးသားဆုကို (၂) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရရွိထားသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မစ္ဇူရီတကၠသိုလ္တြင္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းပညာရပ္ကို သင္ယူခ့ဲၿပီး ၁၉၈၇ ခုနွစ္မွ စတင္ကာ ရုပ္ရွင္ေတြမွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ ဘရက္ပစ္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ Soshwe မွ သူ႕ရဲ႕ အႏုပညာျဖတ္သန္းမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ . . .
၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဘရက္ပစ္ဟာ Another World ဆိုတ့ဲ ျပဇာတ္ကေနစတင္ၿပီး တီဗြီဖန္သားျပင္ေပၚမွာ စတင္ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္တယ္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ 21 Jump Street ဆိုတ့ဲ ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ အပိုင္းတစ္ပိုင္း ပါဝင္ခ့ဲၿပီး The Dark Side of The Sun မွာလည္း ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
သူ႕ရဲ႕ အသက္ (၂၀) ေက်ာ္အရြယ္မွာေတာ့ Cutting Class ဆိုတ့ဲ ထိတ္လန္႕သည္းဖို ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ပါဝင္ သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
ဘရက္ပစ္ဟာ “ Too Young To Die ” ဆိုတ့ဲ ရုပ္ရွင္မွာ Juliette Lewis နဲ႕ အတူ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ ခ်ိန္းေတြ႕ခ့ဲၾကၿပီး အတူတူ ေနထိုင္ခ့ဲၾကပါတယ္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ဟာ ဘရက္ပစ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖို႕ေကာင္းတ့ဲ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခ့ဲၿပီး ဒါရိုက္တာႀကီး Ridley Scott ရဲ႕ Thelma and Louise မွာ နာမည္ႀကီး သရုပ္ေဆာင္မ်ားနဲ႕ ပါဝင္ သရုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိခ့ဲတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူ႕ရဲ႕ခ်စ္သူျဖစ္သူ Juliette Lewis နဲ႕ပဲ “ Kalifornia ” ဆိုတ့ဲ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ ျပန္လည္သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Juliette Lewis နဲ႕ လမ္းခြဲခ့ဲပါတယ္။
၁၉၉၅ ခုနွစ္မွာေတာ့ ေဒးဗစ္ဖင္ခ်ာရဲ႕ Se7en ဆိုတ့ဲ စိတၱဇလူသတ္သမားကားထဲမွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။ ထိုကားထဲမွာ အတူတူသရုပ္ေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ မင္းသမီး Gwyneth Paltrow နဲ႕ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ခ့ဲၿပီး People Magazine က ေပးအပ္တ့ဲ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံး အမ်ိဳးသားဆုကို ရရွိခ့ဲပါတယ္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Twelve Monkeys ဆိုတ့ဲ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေရႊကမာၻလုံးဆုကို ရရွိခ့ဲပါတယ္။
Paltrow နဲ႕ ေလးႏွစ္ၾကာလက္တြဲခ့ဲၿပီး သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္သူသက္တမ္းကို ကို အဆုံးသတ္ခ့ဲပါတယ္။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Friends ဇာတ္ကားရဲ႕ သရုပ္ေဆာင္ Jennifer Aniston နဲ႕ စတင္ တြဲခုတ္ခ့ဲပါတယ္။ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအးဂ်င့္ေတြ မိတ္ဆက္ေပးမႈကေနတစ္ဆင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆုံးအမ်ိဳးသားဆုကို ဒုတိယအႀကိမ္ ရရွိခ့ဲၿပီး Jennifer Aniston နဲ႕ Malibu မွာ မဂၤလာပြဲ က်င္းပခ့ဲပါတယ္။
The Mexican, Spy Game နဲ႕ Ocean’s 11 တို႕မွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Ocean’s 11 နဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခ့ဲပါတယ္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Sinbad: Legend of The Seven Seas ဆိုတ့ဲ ကာတြန္းကားမွာ ဆင္းဘတ္အျဖစ္ အသံ သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ Brad Pitt ဟာ လူႀကိဳက္မ်ားလာၿပီး Troy ဇာတ္ကားနဲ႕ Ocean’s 11 ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲကားမွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Angelina Jolie နဲ႕ Mr. & Mrs. Smith ဆိုတ့ဲဇာတ္ကားကို ရိုက္ကူးေနရင္းနဲ႕ ခ်စ္ႀကိဳက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ထိုႏွစ္ထဲမွာပဲ Aniston နဲ႕ တရားဝင္ ကြာရွင္းခ့ဲၾကပါတယ္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ဟာ Maddox နဲ႕ Zahara တို႕ကို ေမြးစားခ့ဲပါတယ္။ Zahara ဆိုတ့ဲ ကေလးမေလးကိုေတာ့ အီသီယိုးပီးယားကေန ေမြးစားခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕အျပင္ Jolie က Brad Pitt နဲ႕ရရွိခ့ဲတ့ဲ ကေလးျဖစ္တ့ဲ Shiloh Jolie-Pit ကို ေမြးဖြားခ့ဲပါတယ္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Pit နဲ႕ အျခားအဖြဲ႕သားေတြ ျပန္ေပါင္းၿပီး Ocean’s 13 ကို ရိုက္ကူးခ့ဲပါတယ္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ The Curious Case Of Benjamin Button မွာ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီး အၿမႊာေတြျဖစ္တ့ဲ Knox Leon နဲ႕ Vivienne Marcheline ကို ျပင္သစ္မွာ ေမြးစားခ့ဲပါတယ္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Megamind ဆိုတ့ဲ Animation ကားမွာ အသံသရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။ သူ႕အေနနဲ႕ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ထက္ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးအပိုင္းကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ရိုက္ကူးခ့ဲတ့ဲ World War Z နဲ႕ Brad တစ္ေယာက္ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားႀကီး ရရွိခ့ဲပါတယ္။ Gerry Lane အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ခ့ဲရုံသာမက ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္သူအေနနဲ႕ပါ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြလည္း တိုးပြားလာခ့ဲပါတယ္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Steve McQueen ရဲ႕ “ 12 yearsaSlave ” ဆိုတ့ဲ ဇာတ္ကားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ေအာ္စကာဆု ရရွိခ့ဲပါတယ္။ ျပင္သစ္မွာလည္း Jolie နဲ႕ မဂၤေဆာင္အခမ္းအနား က်င္းပခ့ဲပါတယ္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခ့ဲတ့ဲ World War Z ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ဆက္လက္ ရိုက္ကူးခ့ဲပါတယ္။ စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ Jolie နဲ႕ ကြာရွင္းျပတ္စဲခ့ဲပါတယ္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္တ့ဲ Plan B Entertainment ကို အာရုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါတယ္။
Previous မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာရဲ့ ရှားရှားပါးပါး ဓာတ်ပုံများ။
Next စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး အီလက်ထရောနစ်မော်တော်ယာဉ်ကို တီထွင်ထုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ။